Homeရထားလမ်းKonya NCC ကျောင်းသားများကိုအတွက်ဓါတ်ရထားမတော်တဆမှု Giderken Can (ဗီဒီယို) Going ကျောင်းတွင်ရှိကြ၏
Konya NCC ကျောင်းသားများကိုအတွက်ဓါတ်ရထားမတော်တဆမှု Giderken Can (ဗီဒီယို) Going ကျောင်းတွင်ရှိကြ၏
01 / 02 / 2013 Levent Ozen ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထား, ဗွီဒီယို 0
Konya အတွက်လမ်းရထားမတော်တဆမှုကနေ Going ကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းသွားခဲ့ကြသည် NCC နိုင်သလား
Konya လမ်းရထားထဲမှာ Selcuk တက္ကသိုလ်ငါ၏အတန်း Alaeddin Keykubat ကျောင်းပရဝုဏ်တံခါးမှာခရီးသည်တင်ဗင်နှင့်အတူတိုက်မိ, ကျောင်းသားများ 23 25 ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်စုစုပေါင်း။ ဒဏ်ရာရကျောင်းသားများကိုသူတို့စာမေးပွဲဖြေဆိုသှားဖို့ထွက်သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရှိခဲ့၏။
08.45 Alaeddin Keykubat ကျောင်းပရဝုဏ်ထဲမှာ Selcuk တက္ကသိုလ်မှမတော်တဆယနေ့အဆင့်ကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဘယ်သူသည် Alaeddin- ကျောင်းဝင်းအချိန်စွပ်စွဲထိန်းအကွပ်မဲ့ရွှေ့ပြောင်းအောင်အပေါ်အဆင့်ကူးမှာ Hasan Yilmaz ကိုစီမံခန့်ခွဲ 23 M က 51 ပန်းကန်မီနီဘတ်စ်, ၏ 42 နှစ်အတွင်း 8204 ခရီးသည်ခုနှစ်တွင်, ဒါပေမယ့်ခရီးသည် motorman 30 နှစ်အရွယ်အလီလမ်းရထားTokgözတိုက်မိမရှိကြပေ။ အဆိုပါမီနီဘတ်စ်နှင့်အတူဓါတ်ရထားတိုက်မှုအကြမ်းဖက်မှု 15 မီတာအကြောင်းကိုဆွဲငင်ခဲ့သည်။
Vatman Tokgözမတော်တဆမှုသည်ဗန်အတွက်ခရီးသည်အဖြစ်မီနီဘတ်စ်ယာဉ်မောင်း Yilmaz နှင့် 23 ကျောင်းသားများကိုဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရအဆိုပါမွို့၌လူနာတင်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဆေးရုံများမှဝန်ခံခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ကျောသွေးထွက်သံယိုလုပ်-up, စာမေးပွဲအဆင့်ရှိခဲ့သူကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုသွားန်းကျင် hurtling ။
အရေးပါသော NO အန္တရာယ်ရှိတဲ့
Selcuk တက္ကသိုလ် (SU) ပါမောက္ခချုပ်Gökbelခငြ့်အရေး, အဒဏ်ရာရသူသွားရောက်ခဲ့သည်။ ပူးတွဲလုပ် SA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာနဆေးရုံကြီးဒဏ်ရာရ 17 ရဲ့ဘေးထွက်ဖယ်ရှားနှင့်အတူGökbel, တလျှောက်သွား၏။
"က Get" ဆန္ဒကိုဒေသအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်Gökbelတစ်ဦးဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်ရှိကွောငျး, သူ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဒဏ်ရာရတွေ့ရှိခဲ့ကဒဏ်ရာရလူမျိုး၏မရှိခြင်းအသက်အန္တရာယ်ကြောင်းဝမျးသာစရာကပြောသည်။ အခြား 17 8 ကွဲပြားခြားနားသောဖျောပွဆေးရုံမှာကုသခံနေစဉ် Xnumx ပု, တက္ကသိုလ်ရဲ့ဆေးရုံမှာဒဏ်ရာရသူရဲ့Gökbel, "ငါတို့ဆေးရုံကိုဒဏ်ရာရနှစ်ခုအတွက်ကျိုးမျက်နှာသွေ့ခြောက်သောအရိုး, တဦးတည်းလညျးမိမိတံတောင်ဆစ်အဆစ်လွဲခဲ့သည်။ ဤတွင်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ဖြတ်တောက်မှုဦးဒဏ်ရာရကျွန်တော်တို့ရဲ့2ရဲ့ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အလီ T က (30) trams သူကျောင်းဝင်း-Aladdin လေ့လာရေးခရီးကိုအသုံးပြုသည်, S ကို Keykubat ကျောင်းပရဝုဏ် Hasan Y. (51), ပန်းကန်နှင့်အတူ 42 M က 8204 ခရီးသည်တင်ဗင်နှင့်အတူတိုက်မိကောလိပ်ကျောင်းသား 25 ဒဏ်ရာရမတော်တဆမှုအတွက်အများဆုံးအုပ်ချုပ်။
လမ်းရထားမုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါသူ၏လမ်းဆော 19 / 10 / 2015 သူကမုန့်လမ်းရထားကိုဝယ်ခြင်းငှါသူ၏လမ်းဆော: Kayseri Fahrettin ရိုက်ပုတ်အတွက်လမ်းရထားသည့် 56 နှစ်အရွယ်သေဆုံးသွားနှိပ်ပါ။ İldemအတွက်ဗဟို Tala ခရိုင်အတွင်းရှိလမ်းရထားမှတ်တိုင်အဖြစ် 09.00 မှာမတော်တဆ, ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Fahrettin ထွက်အိမ်သူအိမ်သား Tokat ကနေပေါင်မုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ, Marketplace ခရိုင်İldem-4 အတွက်လမ်းရထားမှတ်တိုင်ကနေလမ်းဖြတ်ကူးချင်တယ်။ ငါİldeniz, ဤအတောအတွင်းအဆိုပါမှတ်တိုင်-ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုန်သို့လမ်းရထားတစ်ဦးရိုက်ပုတ်ခြင်းဖြင့်ဝင်တိုက်သောအချိန်သွားကြဖို့။ Fahrettin တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့အရာဌာန၌ရိုက်ပုတ်ဆွဲငင်အလေးအနက်ထားဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ 112 အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များအပေါ်ကြောင်းရိုက်ပုတ်ကွယ်လွန်သွားစိတ်ပိုင်းဖြတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အဆိုပါလမ်းရထားမှတ်တိုင်အနီးသတင်းများဧရိယာ, မျက်ရည်သွန်းနေစဉ်အာရုံကြောချို့ယွင်းဖြုန်း, ကားရိုက်ပါးရိုက်ခြင်းနှင့်သင်္ဘောသားထိန်းသိမ်းခံ ...
ကာနအတွက်ဘူတာ Chilling traffic တစ်ခုကုန်စည်ဒိုင်ဖွစျလာခဲ့သည် 08 / 01 / 2016 ဘူတာရုံ၏ရထားအသွားအလာစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ oluyordu.manisa ဘူတာရုံတစ်ဦးကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အဆင့်ကူးအကြားပြည်နယ်ဆေးရုံ, နွေဦးနေစဉ်အတွင်းကြောင့်လမ်း၏အတွေ့အကြုံရှိကြောပိတ်ဆို့မှုကိုမှပေါ်နှင့်ပိတ် switching pisses ရထား drivers တွေကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။ မီးရထားဘူတာရုံနှင့်အဆင့်ကိုကူးတို့အကြား Manisa ပြည်နယ်ဆေးရုံ, ထိုကြောင့်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုမှပေါ်နှင့်လမ်းပိတ်ထား switching နွေဦးမီးရထားယာဉ်မောင်းနေစဉ်အတွင်းအပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့ pisses ။ လူနာတင်ကားဒီတခါကြားနေရစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာဆေးရုံတစ်ဦးအဆင့်ကိုကူးဝင်ပေါက်အပေါ်ကစားမခံခဲ့ရပါ။ နှစ်ပေါင်းအဘို့, Manisa အသွားအလာပေးနေတာ Manisa ပြည်နယ်ဆေးရုံများတွင်ဗဟိုမီးရထားဘူတာရုံဖြစ်လာခဲ့သည်သွေးထွက်ဒဏ်ရာအကြားအဆင့်ကိုကူးထဲမှာရောက်နေပါတယ်။ ရထားဘူတာရုံမှာညဦးယံ၌ ...
နာကျင်မှု Giderken Samsun ၌ရှိ၏ရထားမတော်တဆငါးဖမ်းလက်အောက်တွင်တည်နေ 28 / 09 / 2015 Samsun နာကျင်မှု Giderken ဖြစ်ခဲ့သည်ရထားမတော်တဆငါးဖမ်းလက်အောက်တွင်ညျနကွေ: ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး Samsun အတွက်ငါးဖမ်းသွားရထားလမ်းရထားအောက်မှာတည်းခိုနေဖြင့်မိမိတို့၏အသက်ဆုံးရှုံးဖြတ်သန်းသွားသည်။ အဆိုပါမတော်တဆမှုနိုင်ငံခြားရေးရုံးမှာနယူးခရိုင်Atatürk Boulevard Interchange ပြည်နယ်၏ Canik ခရိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Yuksel မီးဘေး (57) hit angling သွားရထားလမ်းရှောက်သွားသောအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် Samsun ရထားဘူတာ Veysel Özkara loaded ကျောက်မီးသွေးရထားကနေစက်လုပ်သမား Gelemen သွားသောရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရသိရသည်။ ရထားမီးအောက်မှာကျန်ရှိ Yuksel, အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ စက်လုပ်သမား Veysel Özkaraစကားရပ်ယူခံရဖို့မြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းစတင်ပြေးလွှားနေဖြင့်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့သညျ။ မီးထ ...
ကြောင့် Kocaeli အဘယ်သူမျှမ Way ကိုကျောင်းသွားသည့်လမ်းရထား၏ဆောက်လုပ်ရေးမှ! 12 / 09 / 2018 အခြေအနေကအဘို့အ Izmit သမ္မတနိုင်ငံရပ်ကွက်အတွင်း Turkan Dereli မူလတန်းကျောင်း, Muammer Dereli High School တွင်နှင့် Cahit Elginkan High School တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်အသစ်ကစာသင်နှစ်စတင်နိုင်ရန်တစ်ဦးကအလွန်တိုတောင်းသောအချိန်သစ်ကိုစာသင်နှစ်ရဲ့ start Izmit သမ္မတနိုင်ငံရပ်ကွက်မူလတန်းကျောင်းများတွင် Turkan Dereli မတိုင်မီအချိန်ဟာအလွန်တိုတောင်းသောကာလအလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါသည်, Cahit Elginkan High School တွင်နှင့် High School တွင်ကျောင်းသားများအတွက် Muammer Dereli ကိစ္စတွင်အလွန်ဒုက္ခရောက်နေခဲ့ကြသည်။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမကားတစ်စီးသို့မဟုတ်လူကူးလမ်းကြောင်းနှင့်အတူကျောင်းသို့သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျောင်းခရိုင်ဖို့လမ်းရထားပို့ဆောင်ရေးသေချာစေရန် Tram တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တည်ဆောက်နေ, လအကြာလေ့လာမှုတစ်ခုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လမ်းရထား၏ဒုတိယအဆင့်တွင်ကျောင်းဖွင့်ပွဲအထိဖမ်းခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်မလုပ်ဖို့လမ်းအပေါ်လမ်းရထား၏ ...
Konya အတွက်ဓါတ်ရထားမတော်တဆမှု: 1 ဒဏ်ရာရ 20 / 02 / 2014 Konya အတွက်ဓါတ်ရထားမတော်တဆမှု: 1 နှစ်ပေါင်းSıdıkaက Universal ရထားလမ်းထဲကလမ်းဖြတ်ကူးဖို့ကြိုးစားနေအတွက် 43 yaralı.konya, အလမ်းရထားအောက်မှာနေ၏။ Left ခြေချောင်းကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့်ဆေးရုံအလေးအနက်ထားဒဏ်ရာရSıdıkaက Universal ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ Seljuk ခရိုင်စင်တာများမှာမတော်တဆအဖြစ်ကောင်းစွာ 17.30 နယူး Street မှာအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စွပ်စွဲSıdıkaက Universal သည့်လမ်းကွေ့များသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းရထားမှတ်တိုင်သို့ပျက်ကျခဲ့သည့်လမ်းရထားသံလမ်းကိုကျော်လမ်းဖြတ်ကူးလို။ Universal ရဲ့လက်ဝဲဘက်ခြေမရဲ့ခြေချောင်းကျိုးပဲ့နေသောလမ်းရထားကျော်လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ရလဒ်။ မတော်တဆမှုတစ်ခုဒဏ်ရာရသူအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအဖြစ် universal Sıdıka, အ Selcuk တက္ကသိုလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာနဆေးရုံကြီးကိုဖယ်ရှားခွဲစိတ်မှုခံယူ။ မတော်တဆမှုပြီးနောက်အမည်မဖော် motorman ထိန်းသိမ်းခံခဲ့သညျ။ ...
RayHaber 01.02.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဖေဖော်ဝါရီလ21922 26 အမေရိကန်ထရေးဒင်းလက်ထောက်ဒီဇင်ဘာလ၌တူရကီမှလာသော ...
ကာနအတွက်ဘူတာ Chilling traffic တစ်ခုကုန်စည်ဒိုင်ဖွစျလာခဲ့သည်
နာကျင်မှု Giderken Samsun ၌ရှိ၏ရထားမတော်တဆငါးဖမ်းလက်အောက်တွင်တည်နေ
ကြောင့် Kocaeli အဘယ်သူမျှမ Way ကိုကျောင်းသွားသည့်လမ်းရထား၏ဆောက်လုပ်ရေးမှ!
Konya အတွက်ဓါတ်ရထားမတော်တဆမှု: 1 ဒဏ်ရာရ
Konya 1 အလေးအနက်ထားလမ်းရထားပျက်ကျမှုဦးဒဏ်ရာရ
ကျောင်းကကလေးတွေပို့ဆောင်ခံရဖို့ cable ကိုကားတစ်စီးနှင့်အတူKeçiörenအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
ကျောင်းကိုနေအိမ်ထဲကနေ YHT ရက်ကြာခရီးနှင့်အတူ
Installed ကျောင်းသားများ 800 တထောင်ပေါင် Catenary စနစ်အဘို့အကျောင်းစာအုပ်
ကျောင်းကရထားကိုသွားတိုင်းနံနက် Atmar Can အားဖြင့်ကလေးများ Powered